hockey wanamuhla kancane kancane uvuselela umnotho wezwe kuwo wonke amazinga. Kwengxenye yekhulu leminyaka edlule a amaqembu hockey league babe eSoviet Union, yize kwakukhona ngesikhathi league lokuqala nelesibili, kodwa usizo olukhulu wakhe akazange isebenze. Uma ubheka idivayisi lanamuhla, ngaphezu CHL futhi VHL, kukhona MHL okuyikhona kudala sokulungiselela reserve main wezwe Hockey League ukujula. Ake sicabangele isibonelo omunye MHL amakilabhu kufana nokuya ukulungiselela abadlali abasha ngoba Izilimi omdala okhokhelwayo. "Kuznetsk Bears" - elinye lamaqembu aqeqesha ezingeni kwentsha.
It yadalwa Youth Hockey League eminyakeni eyisishiyagalombili eyadlula, bese iqembu Novokuznetsk "Metallurg-2" kwaba ihlelwe kabusha zibe "Bears Kuznetsk". Singasho ukuthi leli qembu isibe umphakeli esemqoka ye Izishoshovu abasha e Novokuznetsk "Forge".
Ngenxa yokuthi amaqembu ukudlala, hhayi kuphela komunye umuzi, kodwa omunye enkundleni ice phakathi kwalamaqembu ziye zasungula ngokubambisana eduze. Yiqiniso, "Bears Kuznetsk" Azi kahle ukuthi iqembu, lapho elinde kakhulu kukhona "Forge". Ngakho-ke, guys abasha benza konke abangakwenza ukuze babe emigomeni emihle ne umqeqeshi ithimba main. Ngaphezu kwalokho, lezi amakilabhu ezimbili ukuqhuba umsebenzi wokufundisa yabafana lomuzi lwakubo, siqhuba master emakilasini amaqembu amateur Novokuznetsk, okuvumela ukuthutheleka ithalente abasha ekuqaleni kule 'Kuznetsk Bears ", bese kuphela ku" Forge ".
Uma sikhuluma impumelelo esikhathini esingaphansi eziyisishiyagalombili izinkathi zonyaka MHL, kuyafaneleka ukuzinza iqembu. Zonke iminyaka eyisishiyagalombili, "Kuznetsk Bears" nakanjani wafika playoffs esiteji. Futhi uma uthatha inkathi yokuqala, iqembu ukudlalwa kowamanqamu league futhi ilahleke. Ngo zonyaka kamuva, uye wakwazi ukuba basukume okusezingeni eliphezulu ngakho kulesi sigaba. Noma kunjalo, iqembu njalo eziphoqelelwe abaphikisi umzabalazo munyu ukufinyelela esigabeni esilandelayo mncintiswano. Ngokuvamile umphumela inkathi kwakuxhomeke kanjani izinto wangena exhunyiwe noma okuhlobene club, okungukuthi e Novokuznetsk "Magnitogorsk". Uma izinto umfowabo omdala ezazingezinhle kakhulu futhi kwakukhona eziningi ezilimele, leli club kungaba ukubiza abadlali eziningana ehola, kanjalo buthaka iqembu kwentsha.
Iliphi amabhere namandla ezimhlophe noma Kuznetsk?
Uma ubheka amagama amaqembu MHL, "Bears Kuznetsk" - hhayi kuphela amabhere kuleli phiko. Kodwa bonke bangabafundi kwelinye lenkomfa Eastern futhi ukuncintisana oqondile sokufinyelela uchungechunge play-off. Futhi kubalulekile ngokwanele, kulwa okuyisidingo ngempela hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa amaqembu, kodwa nezalo abalandeli. Ngakho-ke, umdlalo ubonisa "Polar Bears - Kuznetsk Bears" kukodwa kudala isiyaluyalu. Futhi kungakhathaliseki ukuthi umdlalo (e Novokuznetsk futhi Chelyabinsk), njalo kubangela nesithakazelo esikhulayo phakathi abalandeli.
Izibikezelo isizini wamanje
Yini ongayisho ngale nkathi? Ayini amathemba for the team ukuqedela endaweni ephakeme? "Kuznetsk Bears" kule sizini waba yimpumelelo angabacwasi. Uma ubheka etafuleni sokugcina sonyaka njalo, kulula ukubona ukuthi ithimba eseqedile endaweni yesikhombisa jikelele futhi endaweni yesine e-Conference Eastern, zishaya nge "amabhere". Ngakho, ngenkathi njalo, "inkinga bear 'nquma umusa komnady, okuyinto okuxoxwe ngazo kulesi sihloko. Futhi esigabeni play-off, zingabe zisakwazi ukuhlangabezana. Ngo ngomzuliswano wokuqala ababenakho izimbangi ezahlukene. Nakuba umsebenzi we- "Bears Polar" ulahlekelwe round futhi "win Kuznetsk Bears 'nge amaphuzu 2: 0.
Vasily Koshechkin: umsebenzi unozinti abanamakhono